အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ Solowheel: ဒီအသစ် giratory စနစ်အထွက်စစ်ဆေး” Kit Buchan ကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္လာနေ့ 8th ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ် Observer များအတွက် 2014 13.03 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
"ပထမဘီးကိုတီထွင်သောသူကောင်လေးတစ်ဦးလူထုံခဲ့သည်,"နှောင်းပိုင်းလူရွှင်တော် Sid ကဲသာဘုရငျကိုကိုးကားရန်, သည်အခြားသုံးဦးကိုတီထွင်တဲ့သူက "ကောင်လေး: သူ ထိုပါရမီခဲ့သည်!"ရှုမြင်၏ဤအချက်နှင့်အတူစာနာအဖို့အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အလိုလိုသဘောထားကိုဖြစ်ပါသည် Solowheel, ပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ဦး, အမေရိကန်တီထွင်သူကတီထွင်တဘီးတပ်ယာဉ်တစ်စီး Shane Chen က. ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်, ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်, တစ်ဦး monstrously လေးလံသော, မြို့ပတ်ရထားလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး, ထက်ဝက်ခန့်သည်တစ်မီတာရှည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမျှအဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်နည်းလမ်းရာပူဇော်သက္ကာ.
အဝါရင့်လေယာဉ်မှူးမှ, သို့သော်, အ Solowheel စက်ဘီးတစ်ခုကြော့နှင့်အဆင်ပြေအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်, ချီပြီးသို့မဟုတ် Segway, ၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးဆွေမျိုး. ငါ Ray Brook ကနေနာရီဝက်ရဲ့ကျူရှင်ခံယူဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့, အဘယ်သူ Solowheel များအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဧဝံဂေလိဆရာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, တွင် 68, ၎င်း၏ပြုပြင်ခြင်း၌ဝှက်ထား Anti-အိုမင်းဂုဏ်သတ္တိများအချို့ကိုကြင်နာဖို့သေတမ်းစာနေထိုင်သောရပ်. ထိုသို့ရှင်းပါတယ်, သူကစက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကတည်းက, သူအနိုင်နိုင်အစိုင်အခဲမြေပြင်ပေါ်တွင်ခြေမကိုထားတော်မူပြီ; ဓား, အစား, ကလေးတယောက် exuberant နှင့်အတူဘဝကတဆင့်, မိမိအခြေထောက်တွေအစဉ်စွဲလမ်းတစ် Solowheel ၏အမွှာအတောင်ပံလျှက်ရှိကြောင်း.
ချောက်ထဲ-မျက်နှာ gripping တစ်ချိ seabird တူ Brook ရဲ့လက်မောင်းကိုဖက်တွယ်, ငါစပါးကျီရင်ပြင်ရဲ့အစွန်းမှာ infernal စက်ဝိုင်းပတ်လည်မှာဦးဆောင်နေပါတယ်, လန်ဒန်, သူတို့လွန်အဖြစ်အနုပညာကျောင်းသားများကိုညှိုးနွမ်းမှတ်ချက်တွေအပြစ်တင်ဘယ်မှာ. "ငါသည်ဆင်းတာပါ, ရောင်ခြည်, ငါ crashing တာပါ,"ငါသည်ခုန်, ဘုရားတရားမဲ့ကွင်းအတွက် flapping ငါ့လက်ရုံး, သူကအားပေးမှုစကားဖြင့်ငါ့ကိုပေါ့ပါးစေ. အဆိုပါဘီးရဲ့မော်တာ, သူသည်ငါ့ကိုပြောထားပါသည်, တစ်ဦး "Gyro-switch ကို" ပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်, သောဘီးဖြတ်ပြီးအလေးချိန်ဖြန့်ဖြူးဖို့တုံ့ပြန်. ရှေ့ဆက်အမှီ, နှင့်မော်တာ Accelerator; နောက်ပြန်, ထိုသို့နှေးကွေး.
အချို့သောခန့်မှန်းအားဖြင့်, 20 မိနစ်သင်ဘီး Astrid အငြိမ့်လွတ်လပ်သောဖြစ်လာရန်လိုအပ်သမျှသည်: ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုငါသာ lissom ဖွငျ့ခဲ့ကြသည်ယူဆပါတယ်နိုင်, သူတို့ကိုနောက်ကွယ်က tightrope အပေါ်ရှည်လျားအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူရော်ဘာ-ခြေလက်အင်္ဂါဆပ်ကပ်-ရိုးရာ. ငါတစ်ပါတ်သည်ညဦးယံ၌ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ယခု jolted Right-ထောင့်အလှည့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, အနည်းဆုံးတစ်မြို့ရိုးကို၏အကူအညီတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မရှိဘဲအရာ mount နိုင်. ထိုသို့အဖြစ်နာကျင်, ငါ၏အနိမ့်ဆုံးယဉ်န်ထမ်းအကြားအဆင့်သတ်မှတ်လက်ခံခိုင်းခဲ့ကြ လေ့လာသူ. အဆိုပါအယ်ဒီတာရဲ့လက်ထောက်, သူမ၏ပထမဦးဆုံး foray အပေါ်, တစ်ဦးရေကန်တစ်လျှောက်တစ်ဦးအရွက်ကဲ့သို့သတင်းကဏ္ဍအနှံ့ပျံ့. တူးမြောင်းတလျှောက်ထိုဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာအမြန်နှုန်း, တစျလကျ၌ Amstel တစ်ပိုင့်. ဒီဖြည့်စွက်အပေါ်ကော်မရှင်၏အယ်ဒီတာသူမကနိုင်ငံခြားရေးစာနယ်ဇင်းအသင်းမှမှာအခမ်းအနားအဘို့ကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်ကြမ်းပြင်-အရှည်ညနပေိုငျးစားဆင်ယင်နေသော်လည်းတစ်ဦးမဖြစ်နိုင်သောထောင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း.
ဒါပေမယ့်ငါကအတူ flyer, Brook မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာဝန်သို့မဟုတ်သစ္စာရှိမှုထဲကမသာ, ဒါပေမဲ့အလေ့အကျင့်အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့် finesse ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုသာဓကအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ကျေနပ်ကြောင့်. အကိုရှင်းရှင်းတိတ်ဆိတ်စွာဘီးအပေါ်ဖြောင့်မတ်, လေတိုက်, ငါ့အင်္ကျီကို billowing, ငါ unpolluted Boulevard တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအနာဂတ်ရှိတယျဆိုတာနိုင်ခံစားခဲ့ရ, ဘီးတပ်ကိန်းဂဏန်းများအုပ်စုများ၏အတိတ်မျော, ပြက်လုံးဖလှယ်ခြင်းနှင့် vaping. ဒါဟာလာပါရူပါရုံကိုခဲ့သည်, အခါငါခွေး-အတော်များများကမျက်စိသိသိသာသာခြံစည်းရိုးသို့တိုတောင်းရပ်တန်.